Ungakwazi yini ukutshela umehluko phakathi kwamakhamera amaningi asendleleni?
Lapho ushayela imoto yakho endleleni, ungathola ukuthi kunamakhamera amaningi kakhulu asendleleni. Ngakho-ke yini umehluko phakathi kwalawa makhamera ahlukile wobuso ...
Lapho ushayela imoto yakho endleleni, ungathola ukuthi kunamakhamera amaningi kakhulu asendleleni. Ngakho-ke yini umehluko phakathi kwalawa makhamera ahlukile wobuso?
Lawa makhamera angahlukaniswa izigaba eziyisithupha. Zingamaphoyisa kagesi, i-bayonet camera,Ukutholwa kwethrafikhi, Izifinyezo zokwephula umthetho, ikhamera yeselula yethrafikhi, iSkynet Monitor ephephile
1. Amaphoyisa kagesi
Amakhamera wamaphoyisa e-elekthronikhi avame ukufakwa emaphethelweni asemqoka, ngokuthwebula ngemuva, ukuqapha izimoto ezisebenzisa isibani esibomvu noma izimoto ezingalandeli umhlahlandlela, ushintsho olungekho emthethweni, izimoto, ukubuyisa izimoto ezingenazimoto nezinye Izenzo. Abakaze bakhombise noma yiziphi izimpawu.
Ukukhanya kwe-LED kuhlale ngalolu hlobo lwekhamera. Ukukhanya okugcwalisiwe kwe-LED kuvame ukungakhanyi phakathi nosuku, ubusuku buzoba bunzima kakhulu, ngokuvamile uma ungakunaki, noma ungacabanga ukuthi kuhlale kukhanyiswe njalo. Abanye abantu bacabanga ukuthi ikhamera ayisebenzi ekukhanyeni akulungile, ngoba abanyeikhamera yokuqapha ngokwayo akukhanyi.
2. I-Bayonet Camera
Emgwaqweni kazwelonke, umgwaqo omkhulu wesifundazwe, izingxenye eziphakeme, amakhamera we-bayonet ahlala ebekwe ngaphezulu kwe-gantry. Isetshenziselwa ukubamba isivinini! Futhi kubanjwa okuhle, ungabona kahle ubuso, umphumela muhle kakhulu! Uma ushayela ngejubane futhi ubanjiwe, futhi ubheka abanye abantu ukuthatha umshayeli'Amaphoyinti welansense, inqobo nje uma amaphoyisa ehlola ividiyo, kulula ukuyibona.
Lapho i-bayonet camera snap, i-flash izokhanya kanye. Uma uzizwa ukhanya ukukhanya kabili, khona-ke kufanele ube ngejubane elikhulu. Imodi ye-Camera ye-Bayone yekhamera ihlukaniswe ngokutholwa kwekhoyili kanye nokutholwa kwe-radar. Ikhoyili ihlukaniswe emhlabathini. I-radar ifakwe esigxotsheni.
Imodi yesivinini se-Camera ye-Bayon Camera ihlukaniswe ngejubane lekhoyili nejubane le-radar. I-Coil iyanqunywa emhlabathini. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ngaphezu kwe-10% yomkhawulo wejubane lomgwaqo, ngeke ajeziswe. Isibonelo, umkhawulo wejubane lomgwaqo ungamakhilomitha angama-60 / h, khona-ke ama-66 km / h noma ngaphansi ngokuvamile awajeziswanga, futhi inqobo nje uma ushayela ngaphezulu kwe-67 km / ihora noma ngaphezulu, kuzolayisha endaweni yokujezisa amaphoyisa ethrafikhi.
Manje amakhamera ahlwitha ngemuva kwemoto, ngakho-ke akufanele sisheshise uma udlula ikhamera, ukushayela okuphephile okulungile!
3. Ukutholwa kwethrafikhi
Lolu hlobo lwekhamera luvame ukufakwa endabeni yamaphoyisa e-elekthronikhi noma isigcawu sesiginali. Umsebenzi wayo oyinhloko ukubala ukugeleza kwezimoto, ukuhlinzeka ngokulawulwa kokuxhaswa kwedatha (ezinye izibani zezinhlobo kususelwa ekukhishweni kwethrafikhi, lapho ikhamera yethrafikhi ithola imoto iphelelwe yisikhathi, kumalambu ngaphansi komyalo okhanyayo). Ikhamera yethrafikhi ngeke ithathwe noma yiziphi izenzo ezingekho emthethweni, kuphela izibalo zethrafikhi
4. Izifinyezo zokwephula umthetho
Lolu hlobo lwekhamera luyindilinga. Ifakwe kakhulu ezindaweni zasemadolobheni ukunqabela isigaba somgwaqo, futhi imoto yabagibeli yomgwaqo omkhulu ngokungemthetho phezulu naphansi, indima yayo ukuthwala indawo yokupaka ngokungemthetho, kepha futhi kungabamba ukubuyisa emuva, ushintsho olungekho emthethweni njll.
Kuyafaneleka ukusho ukuthi lolu hlobo lwekhamera lungasondeza, ngaphansi kwezimo ezijwayelekile kungabona okungenani amamitha angama-200.
5. Ikhamera yamaphoyisa omgwaqo
Lolu hlobo lwe-elekthronikhi iso, ikakhulukazi amaphoyisa angaphatha ngqo noma athule noma afakwe ophahleni. Isimiso saso sitholwa nge-radar wave ukuthola ukuthi imoto iyashesha yini ukushesha, akukhona yini kuzwakala kungabonakali kancane? Noma kunjalo, uzobanjwa ngamaphoyisa.
6. ISkynet Safe Monitor
Lolu hlobo lwekhamera lujwayelekileIkhamera yokubhekwa, ngokuvamile esetshenziselwa uhlelo lokuphepha lomphakathi lweSyket Sysynet, olusetshenziswa ezingxenyeni ezihlukene, izigaba, indawo yokuhlala nakwezinye ividiyo yesifunda, ngaphandle komsebenzi wokuthwebula.
Ekugcineni, ukukukhumbuza ukuthi ikhamera akuyona isitha sethu, ukuvikela ukuphepha kokuhamba, mhlawumbe baphunyule ukuphepha kokuthula, ngakho-ke noma ngabe ngamakhamera omgwaqo, ngoba amathikithi abalulekile , kuphephile futhi kuyigugu.
PHAMBI Ngizothatha imboni yezokuphepha njengomsebenzi wami
Umkhakha Wezokuphepha ube yinhlangano yobuhlakani bokufakelwa OLANDELAYO